सयौं किलोमिटरको यात्रा पछि नाका बाट फर्किने कि प्रक्रिया पुर्याउने ? - Sabda Nepal
सयौं किलोमिटरको यात्रा पछि नाका बाट फर्किने कि प्रक्रिया पुर्याउने ?
२०७७ असार ८, सोमबार १०:१० गते
महोत्तरी बर्दिबासबाट आएको बा१३च ८०९७ नम्बरको बोलेरोको छतमा सामान र सिटभरि यात्रु देखेपछि भक्तपुर र काभ्रेको सिमाना साँगामा खटिएका प्रहरीले गाडी रोके । छतमा आलु, चामल, तरकारीलगायतको बोरा बाँधेर प्लास्टिकले छोपिएको थियो । चालक तीर्थकुमार शाहीले बर्दिबासबाट बिरामी ल्याएको भन्दै मोरङ उर्लाबारी नगरपालिकाको लेटरप्याडमा लेखिएको निवेदन देखाए ।
श्रीमतीलाई पत्थरी भएको भन्दै उनले उपत्यका प्रवेशको अनुमति दिन प्रहरीलाई अनुरोध गरिरहे । झन्डै १५ मिनेट वादविवाद गरेपछि उनी फर्किन बाध्य भए । प्रहरीका अनुसार बोलेरोमा आएका यात्रु वास्तविक बिरामी थिएनन् । ‘अहिले विभिन्न बहानामा उपत्यका छिर्नेको संख्या बढेको छ,’ साँगामा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रहरीको आफ्नो इच्छाले दु:ख दिन फिर्ता गरेको सम्झन्छन् यात्रु ।’
काभ्रे रोशी गाउँपालिकाबाट आएको बा५प ८५४१ नम्बरको मोटरसाइकललाई आवश्यक पास नभएको भन्दै साँगामा प्रहरीले रोके । मोटरसाइकलमा सवार दुई युवा प्रहरीसँग झोक्किए । बुबालाई ब्लड क्यान्सर भएको र औषधि किन्न आएको बताउने कर्णसिंह लामा झन्डै २० मिनेटको वादविवादपछि प्रहरीलाई गाली गर्दै फर्के । उपत्यका छिर्ने बहानामा वर्षौं पुरानो औषधिको प्रेस्क्रिप्सन देखाएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘जसरी हुन्छ यात्रुलाई उपत्यका प्रवेश गर्नु नै छ, भनसुन गरेर होस् वा विभिन्न बहाना बनाएर,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यसरी प्रवेश गर्न खोज्नेको हैरानी प्रहरीले खेप्नुपरेको छ ।’
यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । लकडाउन अवधिभरबिना पास उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने २ हजार ५ सय ६८ सवारीसाधन र ७ हजार ४४ यात्रुलाई नाकाबाट फिर्ता गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले बताए ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि असार १ गतेदेखि उपत्यकाका मुख्य नाका नागढुंगा, साँगा, मुड्खु भन्ज्याङ, फर्पिङबाट ३ सय १२ सवारीसाधन र ९ सय ८९ जना यात्रुलाई फिर्ता गरेको तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीको छ । यो अवधिमा १८ हजार ६ सय ७९ सवारीसाधनमा ३६ हजार ६ सय २९ व्यक्ति राजधानी प्रवेश गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ललितपुर र भक्तपुर प्रशासनसँग समन्वय गरेर जेठ ३२ गतेदेखि उपत्यका प्रवेशका लागि वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासनबाट सवारी अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको छ । जिल्ला प्रशासन काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बुढाले राजधानी प्रवेशका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका प्रवेश गर्न औचित्य, आवश्यकता र कारण खुलाएर आफू आउन लागेको स्थानको वडा कार्यालयबाट लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘वडाको स्वीकृति र सिफारिस लिएर यात्रा सुरु गर्दाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ, यसका लागि यात्रा गर्नुपर्ने कारण खुल्ने कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेस हुनुपर्नेछ ।’
प्रशासनले अनुमति दिएपछि मात्रै यात्रा सुरु गर्न अस्थायी सवारी पास जारी हुनेछ । आउने व्यक्तिले व्यक्तिगत वा संस्थागत जुन प्रयोजनका लागि भए पनि औचित्य खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । आफ्नो स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा क्वारेन्टाइन क्षमता र जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्रै वडाले पनि आउनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने बुढाले बताए ।
जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाउँदै अन्य क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाएको थियो । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको लकडाउन व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड–२०७७ अनुसार पनि यसरी सवारी सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।
उपत्यका भित्रिने सवारीसाधनलाई नाकामा आइसकेपछि फिर्ता गर्नुको विकल्पमा सम्बन्धित जिल्लाहरूमै रोक्नुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रकाशित : २०७७ असार ८, सोमबार १०:१० गते